Gareedka Khadka Macluumaadka Khadka Macluumaadka Qadka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepKhadka Macluumaadka Khadka Macluumaadka Gaziray ee xaafadaha
13 / 12 / 2019 27 Gaziantep, Tareenka Tareenka, tareenka, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, Khariidadaha, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
gaziray kulan xog wacyigelin ah ayaa la qabtay
Gaziantep Dawlada Hoose ee Gaziray Xarunta Macluumaadka Khadka Macluumaadka Khadka Macluumaadka ayaa la qabtay, macluumaad ku saabsan 5 kiiloo mitir ee dhulka hoostiisa ah ee la bilaabay Mashruuca Gaziray.
Mashruuca Gaziray, oo ah mid ka mid ah mashaariicda waa-weyn ee Duqa Magaalada Caasimadda, Fatma Şahin, ayaa shaqooyinka la dardar-geliyey illaa dhammaadka. Kulankii macluumaadka halkaas oo looga hadlay xaalada ugu dambeysa ee mashruuca ayaa lagu qabtay Hoolka Shirarka ee Dawlada Hoose. Marka la eego baaxadda Mashruuca Gaziray, kulanka macluumaadka ee khadka khadka 5 kiiloomitir ee magaalada uga dhex mari doona hab furan; Madaxda xaafadaha, kuwa wax iibiya, masuuliyiinta Golaha Magaalada Gaziantep iyo wakiillada ururada aan dawliga ahayn ee la xiriira ayaa saameyn ku yeelan doona.
GÜZELBEY: WIXII UUU XIRI DOONA SHAQADA
Kulanku, mashruuca 'GAZİRAY Commuter Line Project' wuxuu dhammeystirey qeybta dhulka kor ku xusan, kiiloomitir 5 kiiloomitir dhulka hoostiisa ayaa la sheegay in la bilaabay. Shaqada awgeed waxaa la tilmaamay in wadooyinka qaar ay u xirnaan doonaan taraafikada, shacabka ayaa laga codsaday inay dulqaad muujiyaan inta lagu jiro waqtigan.
Kuxigeenka Duqa Magaalada Caasumada ah Erdem Guzelbey, Gaziray Suburban Line Project ayaa dhameystiray shaqooyinka aan kor ku soo xusnay, wuxuu yiri: “Mashruuca Gaziray ee 5 kiiloomitir kilomitir ee dhulka hoostiisa ayaa laga bilaabi doonaa sababtoo ah wadooyinka qaar, taraafikada ayaa xiran. Gaziray waa mashruuc aad muhiim ugu ah Gaziantep, kiiloomitirkii 5 ee dhulka hoostiisa, saldhigga 4 ayaa la heli doonaa. Qandaraaska qaybta kiiloomitir ee '5 kiiloo mitir ee' Gaziray dhulka hoostiisa ayaa la dhammeystirey howshana ay bilaabeen. Hawshan, waddooyinka qaar ayaa la xiri doonaa. Wadooyinku way dheeraan karaan. Wadada kale ee wadada ayaa la dejin doonaa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri doona dhibaatooyin xagga gaadiidka ah. Waxaan idinka codsanaynaa inaad u dulqaadataan dhibaatooyinkaas. ”
Guzelbey wuxuu sheegay in iskuxirka gaadiidka magaaladu uu sii xoogeysan doono dhamaadka mashruucan wuxuuna intaa raaciyay: “Mashruucan wuxuu ku soo kordhin doonaa qiimo aad u wanaagsan magaaladeena isla markaana magaalada gaarsiin doona heer magaalo. Mashruucan, oo ka fidi doona Taşlıca ilaa Soonaha Aagga Wershadaha, waxaa sidoo kale ku jiri doona tareen xawaare sare leh iyo xarun tareen xawaare sare leh oo 3 ah. Sidaa darteed, magaaladeenu waxay ku heli doontaa darajo sare qadka isku xirka magaalooyinka kale. Xiriirka RAYBUS ee ka socda Taşlıca iyo Nizip waa la xaqiijin doonaa. Waxaa sidoo kale lagu dhex dari doonaa nidaamkan. Markaa, shabakadda gaadiidka magaalada ayaa isku xiri doonta midba midka kale. Iyada oo ah heerka ugu sareeya ee tan, shaqooyinkeenna metrooga ayaa bilaaban doona. Qaab dhismeedka howlahan, waxaa jiri doonta xaalad xiridda waddooyinka. Waxaan kaa codsanaynaa inaad awoodo inaad nagu taageerto howshan
Khudbadda kadib, Gaziantep waaxda qorsheynta gaadiidka iyo nidaamyada tareenka Hasan Kömürcü ayaa kaqeybgalayaasha ogeysiisay dhibaatooyinka suurtagalka ah. Guddiga farsamada ayaa ka jawaabaya su'aalaha kaqeybgaleyaasha waxayna u rajeeyeen Mashruuca Khadka Gaziray Commuter Line inuu faa'iido u yeelan doono magaalada.
“Shirka Macluumaadka Nidaamka Maareynta Maalgashiga” ee TCDD 3-da Agaasime Goboleed…
Gaziantep 3. socodka tareenka marxaladda socdaalka
Mashruuca Tareenka ee Antalya-Konya-Aksaray-Nevsehir-Kayseri ayaa la qabtay
Bozuyukte Soodhaweynta Xarunta Macluumaadka
6. Shirkii Macluumaadka Tareen ee Gobolka
Qiimeynta Kulanka Macluumaadka ee Dib u Dhiska TCDD
TCDD 3. Wadajirka Xogta Dalbashada Guud. 551 ee Gobolka
Kulan Macluumaadka Khadka Gawaarida Gaziray